တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: တပတ်အတွင်း မြင်ရ ကြားရလေသမျှ ...
Posted by မေဓာဝီ at 4:30 AM
ဟိုတနေ့က စင်ကာပူက အစိုးရ သတင်းစာထဲမှာ
မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါးအဖြစ် ပါလာတယ်တွေ့ ရပါတယ်
လခ၏ ၁၀ % ကို ဆေးဖိုးပေး အဲလေ အခွန်ပေးရပါတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတာပါ
အဲဒါကို မစ္စတာအောင် (သတင်းစာထဲကအတိုင်းဖော်ပြလိုက်တာ) ခေါင်းဆောင်တဲ့လူတချို့
ဟားဟား မမေကတော့ တော်တော်ကို ရေးတတ်တယ်ဗျာ..အသောအနှော၊ ရသစုံပါပေတယ်.. မမေစာအုပ်ထုတ်လို့ကတော့ ကျွန်တော်အရင်ဆုံး ၀ယ်ဖတ်မယ်ဗျို့…
Hi, Ma May Dar Wii,
We are trying to publish myanmar blogger book and we also launchablog to accept manuscripts from the members.
On that blog, we would like to describe some of your manuscripts and other famous bloggers who are good at writing.
Will you allow us to do so, Ma May Dar Wii?
မမေ.. ဒီပို့စ်ဒ်လေးအရမ်းကောင်းတာပဲ ။ အရမ်းထိတယ် ။ ဖတ်ရင်း ပြုံးမိတယ် ။
3/24/2007 4:00 AM
Anonymous … သတင်းထပ်ဖြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါရှင်။
ကိုရန်အောင်၊ gen’96 နဲ့ ဂျစ်တူး တို့ အားပေးတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။
mmblogbook … ဘလော့စာအုပ် ထုတ်ဖို့ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်နေကြတာ တွေ့ရလို့ ၀မ်းမြောက်ပါတယ်။ စာအုပ်ထဲ ထည့်ဖို့ဆိုရင် ကျမရဲ့ စာတွေက ပြန်ပြင်မှ ရလောက်မယ်ရှင့်။ ဘလော့ပေါ်မှာ နေ့စဉ် တင်ရတဲ့အတွက် ကမန်းကတန်း ရေးထားတာတွေက များနေလို့ပါ။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျမ သိချင်တာလေးတွေကို ဘယ်လို မေးရမလဲ ဆိုတာလဲ သိပါရစေရှင်။